ကာတွန်း ဟန် – ကူဖော် လောင်ဖက် | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း စောငို - အဆိပ်သင့် မသင့်
Saw Ngo - Respect, Abide, Defend and Protect ....
ကာတွန်း ညီထွေး - ရေဘေးအကူ
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး - အာဏာရတွေ အတိုက်အခံတွေ လုပ်နေစရာလား လို့ ...
ကာတွန်း မောင်ရစ် - အားတဲ့တနေ့ကျရင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ လုပ်ကြရမယ့်ဥစ္စာ ...
ကာတွန်း မိုးသွင် - သူတို့၏ နောက်ဆုံးနေ့များ
ကာတွန်း ဟန် – ကူဖော် လောင်ဖက်
(မိုးမခ) ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄
One Response to ကာတွန်း ဟန် – ကူဖော် လောင်ဖက်
Zarni Gyi on December 14, 2014 at 12:13 pm
Please U Thein Sein, Ministers and Military leaders, your life is not ending asaleader. See your ex-general khin nyunt.
Please Myanmar citizen, stop putting cash inside gov officers’ pocket.